१२ वर्षपछि खोला फर्कियो ! वेल्जियमलाई १-० ले हराउदै फ्रान्स विश्वकप फुटबलको फाइनलमा – Peacepokhara.com
१२ वर्षपछि खोला फर्कियो ! वेल्जियमलाई १-० ले हराउदै फ्रान्स विश्वकप फुटबलको फाइनलमा
काठमाडौं २७ असार । फ्रान्सका लागि विश्वकप फुटबल १२ बर्षपछि खोला पनि फर्किन्छ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भयो । विश्वकपको ईतिहासमा फ्रान्स १२ बर्षपछि पुन फाईनल यात्रा तय गर्न सफल भएको छ । नेपाली समय अनुसार मंगलवार राती भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा वेल्जियमलाई १-० ले हराउँदै फ्रान्सले विश्वकप फुटबलको फाइनल यात्रा तय गरेको हो । फ्रान्सलाई अन्तिम दुईमा पुर्याउने एकमात्र गोल ५१ औं मिनेटमा स्यामुअल उमटीटीले गरे ।
चालु विश्वकपमा एक खेल पनि नहारेको वेल्जियम सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग पराजित हुन पुग्यो । वेल्जियमले गोलका केही सुन्दर अवसरहरु पनि सिर्जना गरेपनि प्राप्त अबसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित भयो ।
यसअघि सन् २००६ मा फाइनल खेलेको फ्रान्स १२ वर्षपछि फाइनल पुगेको हो । उसले सन् १९९८ सालमा विश्वकप जितेको थियो । सन् २००६ को फाइनलमा भने इटलीसँग पराजित भएको थियो । अब उसले उपाधिका लागि इंग्ल्याण्ड र क्रोएसियाबीचको खेलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।
बानियाँलाई गृहराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी
peacepokhara 21 Sep 2015